कांग्रेससँग फेरि सहकार्य गर्नेबारे प्रचण्डको सनसनीपूर्ण खुलासा, ओलीलाई काउन्टर
नेपाल पाना प्रकाशित: २०७४-१२-१४ गते | 29708 पटक हेरिएको
– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष माओवादी केन्द्र
अहिले चाहीँ कांग्रेससगको सहकार्य छोडेर एमालेसँग पार्टी एकता किन गर्न लाग्नुभयो ?
एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने निश्चित जस्तै भइसक्यो । तपाई एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद पक्षधर, कसरी जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्नुभयो ?
यो कुनै नौलो कुरा होइन । महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिमकालका लागि हामीले दुवैजनाले पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनेका हौं । विश्वमा पनि यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ ।